Sawirro: Sida Ay U Codeeyeen Madaxweynaha Somaliland, Murshaxiinta Iyo Dadweynaha – Goobjoog News
Waxaa Somaliland 7badii saac ee la soo dhaafay ka socday doorashada madaxtinnimada, illaa hadda waxaa codeeyay madaxweynaha iyo murashaxiinta, waxaa kale oo la arkayey dad safaf dhaadheer ku jira.
Doorashadan oo laba jeer oo hore dib u dhacday ayaa waxa codayn-doona 704,089 (todoba boqol iyo afar kun iyo siddeetan iyo sagaal qof).
Waxa ku tartamaya saddex xisbi oo midkiiba ay ka socdaan laba musharrax oo kala ah madaxweyne iyo ku-xigeen.
Murashaxiinta Madaxweynnimada iyo Ku-xigeennada:
Xisbiga UCID: Waxaa ka sharraxan Faysal Cali Waraabe oo ah musharraxa madaxweynaha iyo Axmed Cabdi Muuse (Abyan) oo ah musharraxa madaxweyne ku-xigeenka.
Xisbiga KULMIYE: Waxaa ka sharraxan Muuse Biixi Cabdi oo ah musharraxa madaxweynaha iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo ah musharraxa madaxweyne kuxigeenka.
Xisbiga WADDANI: Waxaa ka sharraxan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ah musharraxa madaxweynaha iyo Maxamed Cali Aw Cabdi oo ah musharraxa madaxweyne kuxigeenka.
Saddex musharrax madaxweyne ayaa kasoo kala jeeda gobollada Maroodi-jeex iyo Saaxil. Halka saddexda musharrax madaxweyne ku-xigeenna ay kasoo kala jeedaan gobollada Awdal iyo Sool.
Tirada goobaha laga codayn doonno ayaa gaadhaya 1, 642 goobood kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin Taleex illaa Lawyo-caddo.
Dowladda Federaalka Ah Oo Heshiis Kala Noqotay 17 Shirkad Soomaaliyeed
Xukuumadda Soomaaliya oo ka digtay iibsashada dhulka dowladda
Football Solutions Wilhelmsson wends his way to Bolton - UEFA Europa League - News says:
Despite his disappointment in the Premier League title race, the forward is about to embark on a summer that could mark him down as one of the country’s all-time greats. Harry Kane can enjoy a golden year, says Alan Shearer as former England star tips Tottenham striker to top Premier League and Euro 2016 goalscoring charts
futbol.run Dejan Stanković says:
Manchester United booked themselves an FA Cup quarter final clash against West Ham with a thoroughly professional display against League One minnows Shrewsbury. Shrewsbury 0-3 Manchester United PLAYER RATINGS: Juan Mata stars in attack to ease the pressure on manager Louis van Gaal
[url=https://ventolin90.com/]buy ventolin[/url] [url=https:/...
It's amazing to go to see this website and reading the views...